ဗိုလ်တထောင် စေတီတော်မြတ်ကြီး အတွက် ပထမအကြိမ် အလှူငွေပေးအပ်ပွဲတွင် ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီမှ ကျပ်သ - Yangon Media Group
ဗိုလ်တထောင် စေတီတော်မြတ်ကြီး အတွက် ပထမအကြိမ် အလှူငွေပေးအပ်ပွဲတွင် ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီမှ ကျပ်သ
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၂
ဗိုလ်တထောင် ကျိုက်ဒေးအပ်ဆံတော်ဦးစေတီ တော်ကြီးအား စိန်ဖူးတော်၊ ငှက် မြတ်နားတော်နှင့် ရွှေစင်ရွှေပြား ကပ်လှူရန်အတွက် ပထမအကြိမ် အလှူငွေပေးအပ်ပွဲကို မတ် ၁၂ ရက်တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီမှ လှူဒါန်းငွေ ကျပ်သိန်း ၃၅ဝဝ အပါအဝင် အလှူရှင်များမှ စုစုပေါင်းကျပ်သိန်းတစ်သောင်း ကျော်နှင့် ရွှေထည်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအလှူငွေပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဗိုလ်တထောင် ကျိုက်ဒေးအပ်စေတီတော်ကြီး၊ နန်းဦးဘုရားကြီးတန်ဆောင်း၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး အလှူငွေကျပ်သိန်း ပေါင်းတစ်သောင်းကိုးဆယ့်ရှစ် သိန်းသုံးသောင်းခြောက်ရာကို ဂေါပကအဖွဲ့ထံ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ”တပုဿနဲ့ဘလ္လိကတို့က ဆံ တော်လေးဆူပင့်ဆောင်လာပြီး ရွှေတိဂုံမှာနှစ်ဆူ၊ ဗိုလ်တထောင်ကျိုက် ဒေးအပ်စေတီတော်ကြီးမှာဆံတော် နှစ်ဆူဌာပနာထားတဲ့ စေတီတော်ကြီးပါ။ အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေက အတိုက်အခိုက်ခံရပါတယ်။ လေး အသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းမှာ အစွပ်စွဲခံရဆုံးအတိုက်ခိုက်ခံရဆုံးက မြတ်ဗုဒ္ဓဖြစ်ပါတယ်။ သာသနာပြုတဲ့အခါစိတ်ရှည်ပါ။ သည်းခံပါ။ ဇွဲရှိပါ”ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သံဃနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ (အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ နိုင်ငံ တော်စွမ်းဆောင်ရည်ဆု၊ ဇေယျာ လူမှုထူးချွန်ဆု၊ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး စေတမန်ဆုရ) ဆရာတော်ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဣဒ္ဓိဗလကအခမ်းအနားတွင်သြဝါဒကထာအဖြစ် မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကလည်း”ရှေ့ ဆက်ပြီးတော့လည်း ဘက်စုံပြုပြင် မွမ်းမံရေးအတွက် ကျန်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်လှူဒါန်းလိုသူများနဲ့ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးပါတယ်။ ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အလှူပွဲမှာ ထီး တော်လှူဒါန်းတဲ့သူတွေ ပါဝင်သလို စိန်ဖူးတော်အတွက် လှူဒါန်းတဲ့သူ တွေလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စိန်ရွှေရတနာတွေ လှူဒါန်းထားတာကိုဝမ်းမြောက်စွာတွေ့နေရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီး ထွန်းကားရန်အတွက် သဒ္ဓါတရားထက်သန်စွာဖြင့် လှူဒါန်းမှုများကို အားရဝမ်းသာစွာသာဓုခေါ်မိပါတယ်။ ရွှေထီးတော်တင်မယ့် ဧပြီ ၂၉ ရက်မတိုင်မီကို ဆက်လက်လှူဒါန်းမှုတွေ ဆောင်ရွက်သွားပြီးတော့ စေတီတော်ကြီးရေရှည်တည်တံ့ရေး အတွက် ဘက်စုံမွမ်းမံမှုများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဝမ်းမြောက်ကျေးဇူးတင် စကားလျှောက်ထားသည်။ စေတီတော်ကြီး၏ထီးတော် ဟောင်း၊ စိန်ဖူးတော်နှင့်ငှက်မြတ် နားတော်များကိုလည်း စေတီတော် ရှိ နန်းဦးဘုရားကြီးတန်ဆောင်းတွင်ထားရှိအပူဇော်ခံထားကြောင်းနှင့် လှူဒါန်းလိုသူများဆက်လက်လှူ ဒါန်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်မကတော့ ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီရဲ့နာယကကြီးပါ။ ဒီနေ့ ကျပ်သိန်း ၃၅ဝဝ လှူဒါန်းပါတယ်။ ထီးတော်ကြီးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းက မလှူရသေးတဲ့တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေအားလုံးဘာသာ မရွေး၊ လူမျိုးမရွေးအားလုံးလာ ရောက်လှူဒါန်းကြပါလို့ ပြည်သူလူထုကို နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်”ဟု ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီ၏ နာယကကြီး အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဒေါက်တာ ဒေါ်နီနီက ပြောသည်။ အလှူငွေပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သံဃနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာ တော်ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဣဒ္ဓိဗလ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး၊ အလှူရှင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းနှင့်အလှူငွေများကို ဘဏ်အကောင့်ထဲတွင် စနစ်တကျသိမ်းဆည်းရန်နှင့်အလှူပစ္စည်းရွှေထည်၊ ကျောက်မျက်ရတနာများအား ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရနှင့်ဂေါပကအဖွဲ့ မှ စနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားရန် ဆရာတော်ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဣဒ္ဓိ ဗလက အခမ်းအနားတွင်မိန့်ကြားခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ ကျရှုံးနိုင်သလို အောင်မြင်မှု ကြီးလည်းရနိုင်ဟု ထရန့် ပြော ?
ပြည်သူကို ဗဟိုပြုရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး
မျိုးဗီဇ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုက ရင်သားကင်ဆာ ဘေးဥပဒ်ကို လျှော့ချနိုင်
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ အကူအညီပေးနေမှုများ ရပ်ဆိုင်းသည်မှာ မဟုတ်မှန်၊ စီးပွားရေး ဖွံြ့
ကုန်တင်ယာဉ်စီးရေ ထောင်ချီ ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပေါ်နေသည့် တရုတ်ဝင်ပေါက် ကျင့်စန်းကျော့ နယ်စပ်ဂိတ?
မိဘများ၏ ဂရုတစိုက် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုက အချိန်မတိုင်မီ မွေးဖွားသော ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးကိ